Ixesha kunye nabahlobo 32
Kuyenzeka ukuba ugcine ingcinga ingekho zingqondweni, kodwa akunakwenzeka ukuba ubeke ingqondo ngaphandle kwengqondo njengoko siza kubeka isitampu ngaphandle kwendlu. Isizathu sokuba uninzi lungakwazi ukugcina kude neengcinga ezingathandekiyo, kwaye bengakwazi ukucinga kwimigca eqinisekileyo, kungenxa yokuba bakholelwa kwingcinga eqhelekileyo yokuba kufuneka bakhuphe iingcinga ezingqondweni zabo. Akunakwenzeka ukuba ubeke ingcinga ngaphandle kwengqondo yomntu kuba xa uyibeka ngaphandle kufuneka unikwe ingcinga, kwaye ngelixa ingqondo inika ingqwalaselo yeengcinga akunakwenzeka ukuba ususe loo ngcinga. Lowo uthi: Hambela wena ucinga kakubi, okanye, andizukuyicinga le okanye leya, igcina le nto engqondweni yakhe ikhuselekile ngokungathi ibiwe apho. Ukuba umntu uthi ngaphakathi kuye makangayicingi lento okanye le nto, uya kuba njenge-ascetics kunye ne-hermits kunye nee-fanetics ezenza uluhlu lwezinto abangazukucinga ngazo emva koko uqhubeke uludlulise kolu luhlu lwengqondo kwaye ubeke ezo ngcinga ziphume ezingqondweni zabo kwaye zisilele. Ibali lakudala le "The Great Green Bear" liyibonisa kakuhle le nto. Ingcali yemithombo yeendaba media yagqogqwa ngomnye wabafundi bakhe owayefuna ukuxelelwa ukuba angayidlulisela njani isikhokelo kwigolide. Inkosi yakhe yaxelela umfundi ukuba wayengenakukwenza oko, nangona waxelelwa, kuba engafanelekanga. Ekuqhubekeni kokumbongoza komfundi, i-alchemist yagqiba kwelokuba ifundise isifundo umfundi kwaye yamxelela ukuba njengoko ehamba kuhambo ngosuku olulandelayo uya kumshiya kwifomula anokuthi aphumelele kuyo ukuba wayenakho ukulandela yonke imiyalelo , kodwa ukuba kuya kunyanzeleka ukuba uhlawule eyona fomula kwaye ichaneke ngokupheleleyo kuzo zonke iinkcukacha. Lo mfundi wayechwayitile kwaye eqala umsebenzi ngolangazelelo ngomdla. Wayilandela ngononophelo imiyalelo kwaye ichanekile kulungiselelo lwezixhobo nezixhobo zakhe. Wabona ukuba iintsimbi zomgangatho ofanelekileyo kunye nobungakanani bazo, kunye neqondo lokushisa elifunekayo laveliswa. Wayenonophele ukuba umphunga wonke ugcinwe kwaye udlulile kwii-alembics kunye nokugcina, kwaye wafumanisa ukuba iidiphozithi kwezi zichazwe ngokuchanekileyo kwifomula. Konke oku kwamzisela ulwaneliseko olukhulu kwaye njengoko wayeqhubeka novavanyo wayefumana ukuzithemba kwimpumelelo yakhe yokugqibela. Omnye wemithetho yayikukungafanele ukuba afunde kwifomula kodwa kufuneka ayilandele kuphela njengoko eqhubeka nomsebenzi wakhe. Xa eqhubeka, weza kwisithethi: Ngoku ukuba uvavanyo seluqhubekekile ukuza kuthi ga ngoku kwaye isinyithi sishushu okumhlophe, thatha intwana yomgubo obomvu phakathi kwesiphambuko kunye nesithupha sesandla sasekunene, intwana yomgubo omhlophe phakathi kwengaphambili kunye nesithupha sesandla sasekhohlo, yima phezu kwesibane esikhazimlayo onaso ngoku phambi kwakho kwaye ulungele ukulahla ezi powders emva kokuba uthobele umyalelo olandelayo. Lo mfana wenza njengoko ebeyalelwe kwaye efunda ku: Ngoku ufikile kuvavanyo olubalulekileyo, kwaye impumelelo iya kulandela kuphela xa ukwazi ukuthobela oku kulandelayo: Ungacingi ngebhere enkulu eluhlaza kwaye qiniseka ukuba awucingi nge ibhere enkulu eluhlaza. Eli tyendyana laphefumla. Ibhere enkulu eluhlaza. Andizukucinga ibhere enkulu eluhlaza, utshilo. Ibhere enkulu eluhlaza! Yintoni ibhere enkulu eluhlaza? ndingu, ucinga ngebhere eluhlaza eluhlaza. ”Njengoko wayeqhubeka ecinga ukuba makangacingi ngebhere eluhlaza enkulu angacingi enye into, de ekugqibeleni kuye kwenzeka ukuba aqhubeke nokuvavanya kwakhe kwaye nangona ingcinga yebhere enkulu ibhere eluhlaza yayisengqondweni yakhe waguqukela kwifomula ukuze ubone ukuba yeyiphi i-oda elandelayo kwaye wafunda: Uphumelele kulingo. Uphumelele ngexesha elibalulekileyo kuba uvumele ingqalelo yakho ukuba ithathwe emsebenzini ukuba ucinge ngebhere enkulu eluhlaza. Ubushushu esithandweni bungagcinwanga phezulu, inani elifanelekileyo lomphunga liye lasilela ukudlula kule nto kunye nokubuya, kwaye akunamsebenzi ngoku ukulahla i-powders ebomvu nomhlophe.
Ingcinga ihlala isengqondweni ukuba ithathelwa ingqalelo. Xa ingqondo iyekile ukunikela ingqalelo kwingcamango enye kwaye iyibeka kwenye ingcinga, ingcinga enononophelo ihlala isezingqondweni, kwaye oko kungenamdla kuphuma. Indlela yokukhupha ingcinga kukubamba ingqondo ngokuqinisekileyo kwaye ngokuqhubekayo ibhekiswe kwinto enye kunye nesihloko esithile okanye ingcinga ethile. Kuya kufumaniseka ukuba ukuba oku kwenziwe, akukho zingcinga zinxulumene nesihloko zinokuzifaka ezingqondweni. Ngelixa ingqondo inqwenela into ingcinga yayo izakujikeleza kwinto yomnqweno kuba umnqweno ufana neziko lomxhuzulane kwaye utsala ingqondo. Ingqondo inokuzikhulula kulo mnqweno, ukuba uyavuma. Inkqubo ekhululwe ngayo kukuba ibone kwaye iqonde ukuba lo mnqweno awulungelanga kuwo kwaye ke ithathe isigqibo ngento ebhetele. Emva kokuba ingqondo ithathe isigqibo malunga nesona sifundo sibalaseleyo, iya kubhekisa ingcinga yayo kweso sifundo kwaye ingqalelo inikwe eso sifundo kuphela. Ngale nkqubo, indawo yomxokelelwano iguqulwe ukusuka kumnqweno wakudala ukuya kumxholo omtsha wengcinga. Ingqondo ithathe isigqibo sokuba indawo yayo yomxhuzulane iya kuba phi. Nawuphi na umbandela okanye into eya kuyo ingqondo iya kubakho. Ke ingqondo iyaqhubeka nokutshintsha umxholo wayo wengcinga, umxholo wayo, de amandla afundwe, ade afunde ukubeka iziko lomxhuzulo ngokwawo. Xa oku kwenziwe, ingqondo iyazirhoxisa ngokwayo kunye nokusebenza kwayo, ngokusebenzisa iindlela zengqondo kunye nezixhobo zengqondo. Ingqondo, ayisebenzi ngokusebenza kwimo yayo kwimo yomzimba, kwaye ifunde ukuguqula amandla ayo ukuba ibe yiyo, ekugqibeleni ivuselele ubunyani bayo njengoko yahlukile kwimizimba yayo yenyama kunye neminye imizimba. Ngokwenza njalo, ingqondo ayivezi ubuqu bayo bodwa kodwa inokufumana ubuqu bokwenene babo bonke abanye kunye nelizwe lokwenyani elingena kwaye liphakamisa abanye.
Ukuqaphela okunjalo akunakufikelelwa ngaxeshanye, kodwa kuya kufikelelwa njengesiphumo sokugcina iingcinga ezingathandekiyo zikhuphe engqondweni ngokuthatha nokucinga zabanye abanqwenelekayo. Akukho mntu unokukwazi ukucinga kuphela kwingcamango anqwenela ukuyicinga aze ayikhuphe okanye anqande ezinye iingcinga zingangeni ezingqondweni; kodwa uya kukwenza oko ukuba uzama kwaye aqhubeke nokuzama.